Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Ciyaaraha Oo Agab Sports Guddoonsiiyey Kooxda Kubadda Cagta Dhagoolayaasha Hargeysa
HomeWararka MaantaAgaasimaha Guud Ee Wasaaradda Ciyaaraha Oo Agab Sports Guddoonsiiyey Kooxda Kubadda Cagta Dhagoolayaasha Hargeysa
05/10/2016 Samatar Mohamed
Agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska Somaliland Md. Maxamed Xuseen Axmed (Dhabeeye) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay kooxda kubadda cagta Dhagoolayaasha Hargeysa, sidoo kalena guddoonsiiyey agab ciyaareed u baddnaa direyska kubadda cagta.
Agaasime Dhabeeye oo uu weheliyo Agaasimaha waaxda Maamulka ee wasaaradda ciyaaraha Mr. Cabdikariin Faarax Xasan ayaa si wada-jir ah u guddoonsiiyey qalabkan guddoomiyaha kooxda Dhagoolayaasha Hargeysa, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay ka wasaarad ahaan ay ka bixiyeen kharashka safar ciyaareed ay ku tegayaan dhawaan magaaladda Borama, halkaas oo ay kula soo ciyaari doonaan kooxda dhigooda ah ee Borama.
Ugu horeyn, Agaasimaha guud ayaa ka war-bixiyey ujeedada ay qalabka ugu deeqeen kooxda kubadda cagta Dhagoolayaasha Hargeysa “Waxaanu maanta xafiiskayga aan ku guddoonsiinaynaa aniga iyo Agaasimaha waaxda Maamulku qalab ciyaareed kooxdan dhallinyarada ah ee Maqalka Naafadda ka ah, kuwaas oo ah kooxda kubadda cagta ee ka dhisan caasimadda Hargeysa. Maaha markii koowaad ee ka wasaarad ahaan aanu qalab caynkan ah aanu ugu deeqno, waxaa xusid mudan in sannadkii hore aanu si wada-jir ah agab ciyaareed intan ka baddan aanu guddoonsiinay kooxaha Dhagoolayaasha Hargeysa iyo Borama” ayuu yidhi.
Sidoo kale waxa uu xusay Agaasime Dhabeeye inay gacan ka geysteen kharashka safar ciyaareed ay kooxdani ku tegayso dhawaan magaaladda Borama, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa “Waxaa sidoo kale noo farxad ah inaanu gacan laxaad leh ka gaysano kharashka safar ciyaareed ay kooxdani ku tegayso Borama, halkaas oo ay kula soo ciyaari doonaan kooxda dhigooda ah oo sannadkii hore Hargeysa ay ku qaabileen. Dhallinyarta naafadda ah waxa naga go’an ka wasaarad ahaan wixii taageero ah ee aanu awoodno inaanu la garab istaagno oo aanu ka door-bidno dhallinyarta kale, bulshadda kalena waxaa iyagana ugu baaqaya inay taageero u muujiyaan”.
Ugu dambeyntii, waxaa halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha kooxda Dhagoolayasha Hargeysa, waxaa uu Agaasimaha guud iyo wasaaradda ciyaaraha uga mahad-celiyay taageeradda ay u muujiyeen, waxaana uu hoosta ka xariiqay inay aad ugu faraxsan yihiin gacanta laxaadka leh ee ay ka heleen wasaaradda ee kharashka safarka ay ku tegayaan Borama.
Gaba-gabaddii, Agaasimaha guud iyo Agaasimaha waaxda Maamulka ayaa guddoomiyaha kooxdan guddoonsiiyey agab ciyaareedka iyo lacag adag oo ay safar ciyaareed ugu bixi doonaan magaaladda Borama.